इरानले तोक्यो ट्रम्पको टाउकोको मूल्य ८० मिलियन डलर ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/इरानले तोक्यो ट्रम्पको टाउकोको मूल्य ८० मिलियन डलर !
इरानले तोक्यो ट्रम्पको टाउकोको मूल्य ८० मिलियन डलर !
हलमै अमेरिकाले इरानमा हवाई ह मला गरी इरानी सैनिक कमाण्डर सुलेमानीलाई मा रेको छ । यस विवादमा इरानी नागरिकहरु अमेरिकाप्रति निकै आ क्रोशित भएका छन् ।
इरानी नागरिकहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टाउकाको मूल्य तोकेका छन्। सुलेमानीको अन्त्येष्टिमा हजारौ नागरिकहरु सहभागी भएका थिए । अन्त्येष्टिमा सहभागी इरानी नागरिकहरुले डोनाल्ड ट्रम्पको टाउको ल्याउनेलाई ८० मिलियन डलर ( ८ अर्ब रुपैयाँ) दिने बताएका हुन्। हवाई हमलामा सैन्य कमाण्डरको ह त्यापछि इरान–अमेरिका तनावले छुट्टै मोड लिएको छ।
सुलेमानीको ह त्या गर्ने पहेंलो कपाल भएको पागलको टाउको ल्याए ८ अर्ब रुपैयाँ उपहार दिने बताएका छन् । इरानले अमेरिकी भूमीमै आ क्रमण गरेर सुलेमानी बदला लिने चेतावनी समेत दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना नागरिक र सम्पतिमाथि अब कुनै आ क्रमण भए इरानविरुद्ध नयाँ ह’ति’यार प्रयोग गर्ने समेत बताई सकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार दशौं हजार मानिस उहालाई श्रद्धाञ्जली दिन शोकसभामा सहभागी भए । सोलेमानीको अन्त्येष्टिको क्रममा इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्याह अली खमेनीले आँशु नै झारे ।
तेहरानस्थित सोलेमानीको अन्त्येष्टिको दोस्रो दिन तेहरानमा भेला भएका दशौं हजार मानिसको बीचमा खमेनी रोएका हुन् । यस्तै सोलेमानीकी छोरी जेइनपले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा आ क्रमण गर्ने भन्दै चेतावनी दिएकी छन् ।
‘मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सिपाहीका परिवार आफ्ना सन्तानको मृ त्युको पर्खाईमा समय बिताइरहनेछन्’ जेइनपले भनिन् । शोकसभाकै क्रममा उनले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी फौजलाई आ क्रमण गर्ने चे’तावनी दिएकी हुन् ।
अमेरिकाका लागि ‘अँध्यारो दिन’को चेतावनी उनले दिइन् । सम्बोधनको क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘पागल ट्रम्प, मेरो बुवाको शहादत्सँगै सबै समाप्त भयो भनेर नसोच !’
हेर्नुहोस इमरान खानको त्यागलाई ,जसले देश र जनताका लागी यति सम्म गरेर, दुनियाँलाई नै अचम्मित पारे !